Meydka AUN marxuum Cali Khaliif Galeyr ayaa lagu wadaa in lagu aaso maanta magaalada Mogadishu… – Hagaag.com
Meydka AUN marxuum Cali Khaliif Galeyr ayaa lagu wadaa in lagu aaso maanta magaalada Mogadishu…
Posted on 10 Oktoobar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Wararka ka imaanaya Magaalada Jigjiga ee Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in maanta lagu wado in magaaladaasi laga qaado meydka marxuum Cali Khaliif Galeyr, Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somalia.
Marxuumka ayaa Khamiistii ku geeriyooday Magaalada Jigjiga. Mas’uuliyiinta Dowlad Deegaanka ayaa sheegay in marxuumka uu u geeriyooday xanuunka COVID-19.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddi heer qaran u magacaabay qaban-qaabada iyo aaska Ra’iisal Wasaarihii 1aad ee Dowladdii Madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Diyaarada sida meydka marxuum Cali Khaliif Galeyr ayaa saacadaha soo socda lagu wadaa inay ka dejiso Magaalada Muqdisho, halkaasoo lagula tukan doono Salaadda Janaasada, laguna aasi doono.
Sii Hayaha Wasiirka Kalluumeysiga Somaliya, Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ka mid ah guddiga qaban-qaabada ee aaska Ra’iisal Wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in meydka marxuumka Salaadda Janaasada lagula tukan doono Garoonka Aadan Cadde, isla-markaana uu aasku ka dhici doono isla Magaalada Muqdisho.
Wasiir Bidhaan oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa xusay in Madaxda Qaranka iyo mas’uuliyiin kalaba ay ka qaybgeli doonaan Salaadda Janaasada.
Galeyr ayaa noqonaya Ra’iisul Wasaarihii 3aad oo sanadkan ka baxa umadda Soomaaliyeed. 12-kii bishii Luulyo ayay ahayd markii Ra’iisal Wasaare Xasan Abshir Faarax uu ku geeriyooday Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.